Myat Shu - ခေတ်ဟောင်းတေးများ
You are here : Myat Shu » Archives for ခေတ်ဟောင်းတေးများ
ဆီမီးပွဲတော်၊ ဆို – မေသန်း
Published By Myat Shu On Tuesday, October 11th 2011. Under သီချင်း၊ ရုပ်ရှင်, ခေတ်ဟောင်းတေးများ
httpv://youtu.be/4SUMrdcpn9g သီတင်းကျွတ်ရောက်ပြီဆိုတော့ အခါရာသီနဲ့ ကိုက်ညီမယ့် သီချင်းတင်ဖို့ စဉ်းစားမိတယ်။ အေ၀မ်းတင်မောင်ရဲ့ လူပျိုပေါက်ကိုပဲ တင်ရမလား၊ စိန်ပါတီရဲ့ အပျိုကြီးပဲ ဖွင့်ပြရမလား၊ ဥသြဘသောင်ရဲ့ မိန်းမရဦးမယ်ကိုပဲ နားထောင်ခိုင်းရမလားဆိုပြီး ဗျာများနေရတာပေါ့နော်။ မအေးမိရဲ့ လင်မယူဘူးဆိုတဲ့ သီချင်းလေးကလည်း ချစ်စရာ ကောင်းတယ်။ ဒါပေမယ့် နောက်ဆုံးတော့ အေးအေးဆေးဆေး နားထောင်လို့ကောင်းမယ့် မေသန်းရဲ့ “ဆီမီးပွဲတော်” သီချင်းကိုပဲ ရွေးလိုက်ပါတယ်။ ညီအစ်မခုနစ်ဖော်ဆိုတဲ့ သီချင်းက လွဲလို့ မေသန်းသီချင်း တော်တော်များများကို ၀ါသနာအလျောက် ကျွန်မ စုဆောင်းထားပါတယ်။ တချို့တွေကိုလည်း ယူကျုပေါ်မှာ တင်ထားပြီးပါပြီ။ ခေတ်ဟောင်းသီချင်းတွေကို စုချင်တယ်ဆိုရင် သောကြာနေ့ညနေ ၆ နာရီဆိုရင် Mandaly FM ကနေ ထုတ်လွှင့်ပေးနေပါတယ်။ စစ်ကြိုခေတ်က သီချင်းတော်တော်များများကို အဲ့ဒီအချိန်မှာ ... Continue Reading
Published By Myat Shu On Thursday, September 1st 2011. Under အမှတ်တရ, ခေတ်ဟောင်းတေးများ
httpv://youtu.be/L3_rh-kgPYg ခုတလော (မ)ရွှေစင်ဦး ၀က်ဘ်ဆိုက်မှာ ဆရာဦးသုခအကြောင်း အမှတ်တရစာတွေ ဖတ်နေရတော့ ဦးသုခရဲ့ “လှမဉ္ဇူ” သီချင်းကို မျက်ရှုကနေပြီး ဖွင့်ပြဖို့ ကြံသေးတယ်။ ဒီကြားထဲ အေ၀မ်းတင်မောင်ရဲ့ ဘရဏီနဲ့ သုံးပန်လှ လေးကိုလည်း ကြားစေချင်၊ မေသန်းရဲ့ သီချင်းသစ်လေးကိုလည်း တင်ပေးချင်နဲ့ ဗျာများလိုက်သေးရဲ့။ တကယ်တော့ ဒီသီချင်းတွေကို ယူကျုမှာ တင်ထားပြီးပါပြီ။ ကိုယ့်အမိမြေမှာ ယူကျုကို ပိတ်ထားတော့ အပြင်ရောက်တုန်း ရောက်ခိုက်မှ စုပြီး တင်ထားရတယ်။ ဒါပေမယ့် သီချင်းနဲ့ ပတ်သက်တဲ့အကြောင်းတွေ ရွှီးချင်သေးလို့ ကိုယ်ရေးမယ့် စာနဲ့ ကိုက်တဲ့ သီချင်းတွေကိုပဲ ပရိသတ် ကြည့်ခွင့် မြင်ခွင့်ရအောင် ဖန်တီးထားပါတယ်။ လောလောဆယ်တော့ အထက်က သီချင်းတွေဆီကနေ ရုတ်တရက် အာရုံပြောင်းပြီး နားထောင်ဖြစ်နေတဲ့ ... Continue Reading
Published By Myat Shu On Wednesday, July 13th 2011. Under သီချင်း၊ ရုပ်ရှင်, အမှတ်တရ, ခေတ်ဟောင်းတေးများ, ဆောင်းပါး
httpv://youtu.be/6f-OYEhYGXg ကမ္ဘာမကြေသီချင်း၏ မူလမိခင်သည် ၀ိုင်အမ်ဘီသခင်တင်ရေးသည့် “တို့ဗမာ” သီချင်းဟု ညွှန်းဆိုကြသည်။ သို့သော် ကျောင်းနေစဉ်က မနက်ကျောင်းတက် ခေါင်းလောင်းထိုး၊ ညနေ ကျောင်းဆင်း ခေါင်းလောင်းတီးချိန်များတွင် ၀တ်ကျေတမ်းကျေဆိုရသော နိုင်ငံတော်သီချင်းကို ကျောင်းပြင်ပ ရောက်သည့်အခါ အမှတ်လည်းမရ၊ အယုတ်စွဆုံး ရုပ်ရှင်ဇာတ်ကားမပြမီ နိုင်ငံတော်အလံ အလေးပြု ရန်ကိုပင် အလေးအနက်မရှိ မသိကျိုးကျွံပြုတတ်သောသူများ များများ လာ၍ အခုနေ တို့ဗမာသီချင်း သိလားဟုဆိုလျှင် ယောင်ဝါးဝါးသာဖြစ်ကြချေလိမ့်မည်။ ကျွန်မကိုယ်နှိုက်က တို့ဗမာသီချင်းကို တိုက်ပွဲခေါ်သံ ဇာတ်ကားကျမှ နားထောင်ဖူးတော့သည်။ သို့တိုင် ၀ိုင်အမ်ဘီ သခင်တင်ကိုယ်တိုင်ဆိုသည့်သီချင်းကျတော့ နားမယဉ်သေး။ မြန်မာ့သမိုင်းသည် များသောအားဖြင့် ငါတကော ကောသူများ၏ ထိုးဇာတ်များဖြင့် တန်ဆာဆင်ခဲ့သည် များ၍ သီချင်းတစ်ပုဒ်၏ သမိုင်း၊ သီချင်းရေးသူ၏ ရာဇ၀င်လေးကိုသော်မှ ... Continue Reading